975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupons Diode Laser ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > High Power Diode Lasers > Diode လေဆာ 975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber
Diode လေဆာ 975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber
975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupled Diode လေဆာရောင်ခြည်တစ်ခုတည်းထုတ်လွှတ်သည့်လေဆာဒိုင်အောက်များ၊ မြင့်မားသောတောက်ပသောအမျှင်ဓာတ်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ရိုးရှင်းသောထုပ်ပိုးမှုတို့အခြေခံပြီးတည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အမြင့်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းအားကိုပေးသည်။
975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Diode Laser ၏ ၁။ အကျဉ်းချုပ်
Diode Laser 975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber ၏ 2. နိဒါန်း
975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupons Diode Laser ၏ 3. ထူးခြားချက်များ
975nm 976nm 980nm လှိုင်းအလျား;
Diode Laser 975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber ကိုအသုံးပြုခြင်း
975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupled Diode Laser ၏ 5. Electro-Optical လက္ခဏာများ (T = 25âƒ)
975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupons Diode Laser ၏ ၆။ ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်
၉.၇၅nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupons Diode Laser ကို 975nm ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
hot Tags:: 975nm 976nm 980nm 30W 2-PIN Fiber Coupled Diode Laser၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကား၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်၊ အမြောက်အများ၊ တရုတ်၊